FAQs - Shijiazhuang Retool Stainless Simbi Zvigadzirwa Co, Ltd.
Kwete, tinogona kugadzira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Hongu, tinogona kupa zvinyorwa zvakawanda kusanganisira zvinyorwa / saizi mushumo; Chibviro, uye mamwe magwaro ekutumira kunze kunodiwa.
Ndeipi iyo yekuraira nguva yekutumira?
Semuenzaniso, nguva yekutungamira ndeye mazuva makumi matatu. Nekugadzirwa kwemazhinji, zvinoenderana neyakagadzirwa zvigadzirwa uye huwandu, nguva yekutungamira ndeye mazuva 30-60 mushure mekugamuchira mubhadharo wedipo. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana. Tigamuchira dhiziri renyu, uye. Tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzekutungamira dzisingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugovera zvaunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
Iwe unogona kuita kubhadhara kune yedu kubhengi account: 30% dhipatimendi pamberi, 70% chiyero kupokana nekopi yeB / L.
Isu tinopa waranti yemidziyo yedu uye basa rekugadzira. Kuzvipira kwedu ndeye kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune waranti kana kuti kwete, ndiyo tsika yekambani yedu kugadzirisa uye kugadzirisa zvese zvine vatengi kugutsikana.
Iwe unogona kuvimbisa kuendesa kwakachengeteka uye kwakavimbika kuendesa zvigadzirwa?
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairika zvongedzo zvinodikanwa zvinogona kuunza imwe mubhadharo.